Home Wararka Dibada Soomaaliya iyo Hey’adda IMF oo gaaray heshiis cusub kadib wadahadalkii ay...
Soomaaliya iyo Hey’adda IMF oo gaaray heshiis cusub kadib wadahadalkii ay la yeesheen Madaxweynaha cusub Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Hey’adda Lacagta Adduunka ee IMF ayaa gaaray heshiis muhiim ah oo ku saabsan geeddi socodka Deyn Cafinta iyo dib-u-eegista Wajiyada 2aad iyo 3aad Barnaamijka ECF ee dib-u-habeynta hannaanka Maaliyadda iyo Horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya.
Heshiiska IMF ayaa yimid kaddib markii ay soo dhammaatay doorashadii Madaxweynaha ayna wadahadal yeesheen 17 ilaa 18 May Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Mudane Xasan Sh Maxamuud oo uu wehliyo wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo hey’adaha dhaqaalaha.
Madaxweynaha Cusub ayaa dhegeystay warbixinta hey’adaha dhaqaalaha isaga oo la wadaagay sida ay uga go’aan tahay dowladiisa Cusub ka mira dhalinta barnaamijka dayn cafinta.
IMF waxa ay sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya kor u kacay sameeyay dhib kasta oo ka jiro dalka, sida Abaaraha. Hey’adda IMF waxa ay ay ballan qaaday in ay si dhaw ula shaqayn doonto dowladda cusub iyo Hey’addaha Maaliyadda dalka.
“Waxa aan ku faraxsanahay in Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Hey’adda IMF ay gaareen heshiis muhiim u ah geeddi socodka deyn-cafinta iyo Dib-u-eegista Wajiyada 2aad iyo 3aad Barnaamijka ECF ee dib-u-habeynta hannaanka Maaliyadda iyo Horumarinta dhaqaalaha dalka”. Ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.
IMF ayaa waxa ay horrey u sheegtay un haddii la gaaro 17 bisha May ay halis gali doonto taageerada Maaliyadeed iyo kabka dhaqaalaha ee la siiyo Soomaaliya, taasi oo ay sheegtay in haddii aan doorashada Madaxweynaha waqti taas la qaban ay dhibaato wayn gaari doonto horumarka laga sameeyay dhawrkii sano ee la soo dhaafay dhaqaalaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sh Maxamuud ayaa sheegay 100-ka maalin ee ugu horeysa uu xoogga saari doonaa horumarinta dhaqaalaha iyo in Soomaaliya ku guuleysato wadahadalka dayn cafinta oo helis u galay in uu joogsado kadib dib u dhacii doorashada.
Heshiiska IMF iyo dowladda Soomaaliya ayaa keenayaa in hey’adaha dhaqaalaha iyo deeq bixiyayaasha dib u bixiyaan dhaqaalaha kabka miisaaniyadda iyo mashaariicda ee ay u hakiyeen dib u dhaca doorashada.
Previous articleMaxay ka wada hadleen Madaxweyne Xasan Sheekh & Guddoomiyaha Aqalka Sare?
Next articleMadaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay dabkii ka kacay Suuqa Banaadir
Rooble ayaa ka qeyb galaya shirka Golaha Wadatashiga Qaranka
DEGDEG Kooxo hubaysan ayaa Muqdisho ku dilay Nabaddoon Warsame...